Lashio – discoverinmyanmar
Lashio is the largest town in northern Shan State, Myanmar, about 200 kilometers (120 mi) north-east of Mandalay. It is situated onalow mountain spur overlooking the valley of the Yaw River. Loi Leng, the highest mountain of the…
Cycling, Pagoda, Sight Seeing
Trip Code :WT-CODE 3556
Lashio is the largest town in northern Shan State, Myanmar, about 200 kilometers (120 mi) north-east of Mandalay. It is situated onalow mountain spur overlooking the valley of the Yaw River. Loi Leng, the highest mountain of the Shan Hills, is located 45 km (28 mi) to the south-east of Lashio.The British Colonial period in this part of the country began in 1887, and the Myanmar Railway line from Mandalay reached Lashio in 1903.
လားရှိုးမြို့သည်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၏ မြို့တော်ဖြစ်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် နီးစပ်သော ကုန်သွယ်ရေးရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ အာဆီယံသို့ ကုန်သွယ်ရေးဝင်ပေါက် လမ်းကြောင်းပေါ်မှ မြို့အဖြစ်လည်း ကျော်ကြားသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သည်။
ရှေးယခင် သီပေါ၊ သိန္နီ၊ မိုင်းရယ်၊ နမ့်ခမ်း အစရှိသည့် ရှမ်းစော်ဘွားများအုပ်ချုပ်စဉ်က လွယ်ရိုး အမည်ရှိ ရွာလေးသာဖြစ်သည်။ ၁၉၀၄တွင် အင်္ဂလိပ်တို့က သိန္နီစော်ဘွား၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှခွဲထုတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်အရေးပိုင်တစ်ဦးထားရှိအုပ်ချုပ်စေခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်မှီ တရုတ်-မြန်မာလမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် စီးပွားရေးကောင်းမွန်လာသဖြင့် လူနေထူထပ်လာသောကြောင့် လားရှိုးအမည်ဖြင့် မြို့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်းဘောင်ခေတ် ဆင်ဖြူရှင် လက်ထပ်က တရုတ်-မြန်မာစစ်ပွဲကာလအတွင်းတွင် စစ်စခန်းထောက်ရွာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းက ဂျပန်၊ တရုတ်နှင့် မဟာမိတ်တပ်များ၏ စစ်စခန်းချရာအဖြစ် လည်းကောင်း မှတ်တမ်းများရှိခဲ့သည်။နေထိုင်သည့် လူမျိုးများမှာ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ တရုတ်၊ ကချင်၊ ကိုးကန့်၊ ဂေါ်ရခါး နှင့် ကုလား လူမျိုးများ အဓိကနေထိုင်ပြီး အခြားတိုင်းရင်းသားများလည်း အနည်းငယ် နေထိုင်ကြသည်။မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များ၏ စီးဆင်းရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရာအဖြစ်လည်းကောင်း ကျော်ကြားသည်။ ထို့ပြင် ဒေသထွက်ကုန်စည်များ၊ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များကို ပြည်တွင်း နှင့် ပြည်ပ(တရုတ်နိုင်ငံ) များသို့တင်ပို့သည်။
Aye Gabar Pagoda
Mansu Shan Buddhist Monastery
Mao Kham Buddhist Temple
Lashio Night Bazzar
Golden Mount Hotel
Thidar Aye Hotel
Lashio Glaxy Hotel
Silver Sky Hotel & Restaurant
Hnin Taung Tan Restaurant
Lashio Gyi BBQ Restaurant
Lashio Shan Noodle & Food
Lashio May Restaurant
Plus One Hot Pot
Be the first to review “Lashio” Cancel reply